Ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaan booda mootummaan saba himaalee biyyattii keessatti seera cabsan jedhe irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana Keessaa Abbaan Taaytaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yoo cufu, Dimts Woyyaanee, TV Tigraay fi ASRAT’f ammoo of eeggannoo kennuufii beeksisee jira.
Dhimmuma kanaan wal qabatee Waajjira OMN ka damee Finfinnee mootummaan cufuu, gaazexeessitoonni kanneen illee hidhamuu Dookter Tokkummaa Dhaabaa, abukaatoon dhaabbatichaa VOA’f himanii jiru.
Dookter Tokkummaan, humnootni nageenya bakka hojjettoonni, akkasumas taajjabdoonni hin jirretti Biiroon OMN ka Finfinnee jiru akka sakatta’ame, ammas waajjira kana ka harkaa qabu mootummaadha jedhan.
Dabalaniis Dr. Tokkummaan waa’ee kana karaa seeraan akka hordofaa jiran akeekan. Gaazexeessitoota OMN keessaa kan hidhame jedhame Mellesee Dirribsaati; haati warraa isaa Taaddelech Margaa VOA’f yeroo dubbatte Melleseen erga manaa bahee to’annaa poolisii jela oolee Guyyaa kudhani dhaqnees qaamaan arguu hin dandeenye jetti. Taaddelech Melleseen erga qabamee mana murtiif akka hin dhiyaanne, yeroo ammaa kanas mana hidhaa ‘Maa’ikelaawii’tti hidhamee akka jiru dubbatte.
Dhimmuma kana ilaalchisee gartuun kabaja mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ’n tarkaanfii dhiyeenya mootummaan Itiyoophiyaa saba himaalee fi gaazexeessitootarratti fudhataa jiru hordofaa akka jiru beeksisee jira. Muthookii Muumoo Bakka Buutuun CPJ ka biyyoottan Saharaa gadii VOA’f yeroo dubbatte akka jettetti, ‘Ejjennoon Mootummaan Itiyoophiyaa Walabummaa “Press”rratti qabu, hin calalu, rakkootu irratti mullataa jechuun ibsite.
Muzhookiin yoo dubbattu ‘Waanin himu asirratti, nus akka CPJ’tti akkasumas dhaabbileen mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuf falman kaan itiyoophiyaa keessatti waa’ee gaazexeessitoonni hidhamuu fi Interneetiin cufamuu ilaalchisee dhuma bara 2018 kaasee yaaddoo akka qabnu dubbataa turre. Bara 2018 gara dhumarraa kaasee yeroo yaaddoo keenyaa kana ibsine sana, Itiyoophiyaan walabummaa Pireesiin wal qabatee sadarkaa abdachiisaarra turte, tarkaanfiiwwan kunis abdii kanaaf gufuu akka turan, kana malees amalli kun amala mootummaa darbee akka turee fi deebi’ee akka hin ammaannee alasuu watwaataa turre. Amma waanti ta’e guutummaatti ifa tahuu baatus, egaa abdiin keenya, ta’ee kanaan wal qabatee mirgi walabummaa saba himaalee guutummaan badee dukkana duriitti akka hin deebine abdiin qaba. Yoon akkas jedhu mootummaan kun raawwatee bakkuma duraatti deebi’ee odoo hin taane, amalli duraanii kun keessaa hin bannee jechuu kiyya’ jetti.
Muthoki’iin mootummaan interneetii cufuun odeeffannoon dhugaan akka hin argamne dhorkee jira, kanaaf dhaabbilee Miidiyaa fi gaazexeessitoota tarkaanfii mootummaan fudhate jedhameen warra miidhaman adda baafachuun CPJ’f rakkoo ta’eera jechuunis dabalataan dubbattee jirti.
Hamliin Yuuniversitiitti ogeessa sab qunnamtii ka ta’an gargaaraa piroofeserii Indaalkaachew’n gaafa Hacaaluun Ajjeefame qabiyyeewwan Qophii OMN’rratti darban kan saba walitti buusu turan jedhu, duubarra qabiyyeewwan akkasii balaa waan baballisaniif interneetiirraa buufamuun gaariidha,
dhaabbileen mirga odeeffannoo argachuu sabaa hordofanis waan mara qixatti utuu ilaalanii hordofanii gaariidhaa jechuun dubbatan.
Nutmaan Ali Dodolaa barsiisaa yuuniversitii Finfinnee Muummee barnoota Gaazexeessumaati. Du’a Hacaaluun booda rakkoon biyyattii keessatti mullate gama saba himaaleen waan kanaan dura deemaa ture kan ifatti baasee jechuun dubbate.
Nutmaaniin tarkaanfii mootummaan saba himaaleerratti fudhte ilaalchisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu, tarkaanfiin fudhatame, kaan ka duubatti harkifate, kaanis kan dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe.
Dhumarrattis furmaata yoo kaa’an, Qaamolee kana hiranii yaada tahuu qaba jedhan akkasitti kaa’an. Tokko warri Miidiyaa bitaa mirgatti wal hiree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gageessuu fi dhiyeessuu qaba, mootummaan ammo erga dubbiin achi fagaatee tarkaanfii hin malletti deemuurra, jalqabumaan ala badiin uumamu, seera sarbamerratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedhan.
Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa kibxata darbe, OMN waajjira Finfinnee jiru, dhaabbatichi odeeffannoo saba sabarratti kakaasu dabarse jechaan kan cufe yoo tahu, sanaan boodas dhaabbilee miidiyaa Dimts Woyyanee, fi Televizyinii Tigraay qilleensarraa akka ugguraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatelaayit Reediyoo nnaa Televizyiin jedhamuuf ammo of eeggannoo laachuunsaa ni yaadatama. Dr Geetaachew Dinquus angawaan Abbaa Taaytaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa torbee darbe VOA’f badiin OMN ka yakkaan ka gaafachiisu waan ta’eef Abbaa Alangaa Mootummaatu dhimma kana hordofaa jechuun VOA’tti dubbatanii turan.